Imakethe kaKhisimusi ye-Yiwu iyimakethe enkulu yokuthekelisa yemikhiqizo kaKhisimusi e-China.
Imakethe kaKhisimusi igcwele isihlahla sikaKhisimusi, ukukhanya okumibalabala, umhlobiso kanye nakho konke okuhlobene nemikhosi kaKhisimusi.Kuhlukile nakwezinye izindawo, ngoba le makethe uKhisimusi cishe uthatha unyaka wonke.Imihlobiso kaKhisimusi engaphezu kuka-60% yomhlaba kanye nama-90% aseShayina akhiqizwa ku-Yumthetho.
YIWU UMKHIQIZO WEZIMAKETHE KAKhisimuzi
Kunamayunithi angaphezu kuka-300 abhalisiwe embonini yemikhiqizo kaKhisimusi emakethe ye-Yiwu Christmas.
Imikhiqizo kaKhisimusi ihlanganisa ithoyizi likaKhisimusi, isihlahla sikaKhisimusi, ingubo kaKhisimusi ukukhanya kukaKhisimusi kanye namashumi ezinkulungwane zezinhlobonhlobo.Le makethe ibizwa ngokuthi “ikhaya langempela likaKhisimusi” ngabezindaba bakwamanye amazwe.
YIWU IMAKETHI KAKHISIMUSI
Imakethe kaKhisimusi ye-Yiwu itholakala edolobheni lezohwebo lamazwe ngamazwe yiwu esifundeni sokuqala nesitezi sesithathu.Futhi kukhona isitolo esihlakazekile esiseduze ne-Jinmao mansion .Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngale makethe, ungaxhumana nathi noma ungasebenzisa imephu ye-yiwu ukusesha indawo.